शिलाजीतको के छ फाइदा, कुन विरामीले हुन्न खान ?
मुख्य पृष्ठHealth Tips खानपान स्वास्थ्यशिलाजीतको के छ फाइदा, कुन विरामीले हुन्न खान ?
विराटनगर ५ असोज । पहाडी गुफाबाट निकालिने शिलाजीत स्वास्थ्यकोलागि फाइदाकारी छ । वर्षैदेखि नेपाली समाजमा यसको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
तर यसको विषयमा केही गलत बुझाइ समेत रहेको छ । शिलाजीतमा हुने खनिज तत्वले हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ । यसमा हुने आयरन, जिंक, म्याग्नेशियम लगायतका खनिज तत्वले शरीरमा रक्तसञ्चार बढाउने र रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई बढाउने डाक्टरहरुको भनाई छ । शिलाजीतमा ८५ भन्दा बढी प्रकारको खनिज तत्व पाइन्छ । यो सबै खनिज तत्व शरीरकालागि आवश्यक छ । यस्तै शिलाजीतको सेवन गर्दा पेट सम्बन्धि समस्याहरु, पाचनतन्त्रलाई स्वास्थ्य राख्न र अल्जाइमर, डिप्रेसन र दिमाग ताजा राख्न पनि मद्धत गर्छ ।
तर यसको उपभोक्ताहरुबीच शिलाजीतले भियाग्राले जस्तै काम गर्ने भ्रमपनि पाइन्छ । यो कुराम सत्य नभएको डाक्टरहरुले बताए । मुसामा गरेको परिक्षणमा मधुमेहको मात्रा ठिक बनाउन समेत सकरात्मक प्रभाव पारेको विज्ञहरुले बताए । यस्तै हड्डी तथा जोर्नीको समस्या भएकाहरुलाई समेत शिलाजीतको सेवन गर्न डाक्टरहरुको सल्लाह छ ।
शिलाजीत राम्रोसँग प्रशोधन नभएको भए यसले उल्टो हानी गर्ने उनीहरुले बताए । त्यसैले राम्रोसँग प्रशोधन गरिएको शिलाजीत पाएमात्रै सेवन गर्न उनीहरुको सुझाब छ । अनि ब्लड प्रेसरका बिरामीले समेत शिलाजीतको सेवन गर्न नहुने विज्ञहरुले जानकारी दिए ।
एउटा चनाको दाना जत्ति एक कप तातो दुधमा हालेर शिलाजीतको सेवन गर्दा फाइदा हुने गर्छ । प्रौढहरुले दैनिक र यूवावस्थाकाहरुले हप्तामा दुई पटकमात्रै शिलाजीतको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।